Arugula uye macadamia pesto - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Arugula uye macadamia pesto
Sauces2 maminitsi576 makarori
Neiyi arugula uye macadamia pesto iwe uchakwanisa kuipa kubata kwemazuva ano uye kwakasiyana kune yako pasta ndiro.
Iwe unotoziva kuti tinoda cuisine yekuItaly uye kuti tinoda pesto. Saka isu hatigone kupotsa muunganidzwa wedu wemabikirwo a inosetsa uye yepakutanga vhezheni sezvanhasi.
Chinhu chakanakisa nezve pesto iyi ndechekuti inogadzirwa nayo nyore zvinoshandiswa uye iwe unogona kuishandisa kwete chete mune yako pasta ndiro, asiwo mukati bruschettas kana toasts, salads kana kuti kuibata zvakasiyana kumabikirwo ako echinyakare.
1 Arugula uye macadamia pesto
2 Unoda kuziva zvakawanda nezve arugula uye macadamia pesto?
Muto wechinyakare wakagadzirwa nezvinhu zvinosanganisa zvakakwana.
Imba yekicheni: mazuva ano
Recipe mhando: michero
Kubika nguva: 2M
Nguva yakazara: 2M
50 g yeManchego chizi yakaporeswa
50 g yenguruve
1 diki gariki clove
90 g mafuta omuorivhi
Tinotanga nekuyera mafuta. Nokuda kweizvi tichaisa chivharo uye tivhare zvakanaka. Tinoisa girazi kana ndiro uye isu tinomutsa chiyero basa, tinowedzera mhandara yemafuta emuorivhi kusvikira tasvika pahuremu hwakaratidzwa. Isu tinobvisa uye tinochengetedza.
Kugadzira cheese, tinoiisa mugirazi uye purogiramu 10 masekondi, kumhanya 8. Isu tinobvisa uye tinochengetedza.
Pasina kushambidza girazi, tinoisa arugula yakachena uye yakaoma. Wedzera walnuts, peeled garlic clove uye munyu. Tinocheka Masekonzi mashanu, kumhanya 5.
Isu tinodzikisa musanganiswa wakananga kune mashizha. Uye tinodzokorora kushanda 2 dzimwe nguva.
Isu tinoisa mukombe munzvimbo yayo uye chirongwa Masekonzi mashanu, kumhanya 30. Tinodonhedza mafuta pachivharo icho, zvishoma nezvishoma, chichapinda mukati megirazi. Nokudaro tichawana musanganiswa we emulsified.
Wedzera grated cheese uye kupedza kusanganisa Masekonzi mashanu, kumhanya 5.
Isu tinobvisa uye takagadzirira kushandira.
Nezviyero izvi, 200 g yemuto unobuda.
Iko kcal inoverengerwa yega yega 100 g.
Unoda kuziva zvakawanda nezve arugula uye macadamia pesto?
Ndicho gadziriro huru zvikuru yakagadzirwa nemishonga yakapfava inoita basa rinokosha zvikuru kuitira kuti muto uyu uenzane.
Kune rimwe divi isu tine Manchego cheese yakarapwa iyo inopa iyo yakanyanya kubatwa kweSpanish uye inowedzera kunaka. Ukuwo, macadamia anobatsira nekuomarara kwayo. Uye zvechokwadi tine arugula zvinopa ruvara rwegirinhi rwakanyanya uye nekuvava zvishoma uye kunhuwirira.
Uyewo mafuta omuorivhi ine basa rayo rinotungamirira. Shandisa imwe yakatsetseka nekuti kana iine kunhuhwirira kwakawanda inogona kuvhara nuances yezvimwe zvinongedzo.
Izvi pesto unogona shandisa mumabikirwo asingaverengeki pasta asi kune zvakare yakanaka kwazvo masanganiswa seizvi nemupunga kana uyu mumwe nemuriwo. Kunyangwe zvichienda pamwe chete hove y miriwo.
Muto uyu chengetedza zvakanaka kwemazuva mashomanana mufiriji chero bedzi iri mumudziyo wakachena uye yakafukidzwa nemafuta matete anozoita semudziviriri.
Mamwe mashoko - Tostas ane mazai akachekwa uye pesto muto / Mbatatisi Inodziya, Broccoli uye Hove Salad ine Homemade Pesto / Pesto hummus / Mupunga une pesto nematomatisi akaomeswa / Koliflower uye crunchy bacon ine pesto béchamel uye cashew inoparara / Yakabikwa hake ine pesto uye tomato / Nyemba dzine pesto muto
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Sauces
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Sauces » Arugula uye macadamia pesto
Roscón de Reyes yakagadzirwa nekeke resiponji